Ny hevitro momba ny fijery sy fahatsapana ny Libreoffice II | Avy amin'ny Linux
Christopher castro | | Fisehoana / personalization, fampiharana
Rehefa afaka 5 taona sy iray volana dia te-hamerina ny hevitro momba ny Libreoffice Look aho, raha te hahita ny fidirana voalohany ianao ity ny rohy. Toy ny ankamaroan'ny fidiran'ny bilaogy dia ny fanehoan-kevitra no tena mahaliana.
Ny tiako tamin'ny fampiharana ny fanavaozana azy amin'ny fomban'ny Libreoffice farany teo dia ny nitiavantsika azy rehetra, satria farafaharatsiny mba mahazo aina aho amin'ny fametrahana ny menus sy ny toolbar, ho an'ireo izay maniry fanovana mangatsiaka kokoa nanampy ny omnibarra.
Ho an'ireo izay te hanandrana azy amin'ny Ubuntu 16.04
sudo apt apetrakao maimaimpoana
Ilaina ny mandeha amin'ny Tools >> Safidy >> Libreoffice >> Advanced >> Endri-javatra tsy azo atao ary ampandehano ny mampandeha ireo endri-panandramana.
Ary mba hizaha toetra ny fisehon'ny menio vaovao dia mandehana any amin'ny Jereo >> Fitaovana fizahana Toolbar >> Omnibarra
Ahoana ny fomba hampiasana ny omnibarra
Ary ho toy izao manaraka izao.
Farafaharatsiny tiako ny fomba fampiharana azy ireo, taorian'ny fanesoana maro, fifanakalozan-kevitra ary faniriana fanovana nandritra ny taona maro.
Ho famaranana, na dia farafaharatsiny tiako ny mampiasa ny menio sy ny maody ho an'ny fitaovana, dia nahita fomba hanamboarana ny fandaharana ireo mpamorona mba handresentsika rehetra, ho an'ireo izay tia ny endrika kofehy, ho an'ireo izay tia azy manana bara tokana, ho an'ireo izay tia ny bara ilany ary araraotiny ny toerana satria amin'ny mpanara-maso sasany misy tahan'ny 16: 9 fa tsy fanapahan-kevitra lehibe dia ilaina ny manararaotra ny habaka marindrano. Miorina ihany ny milaza fa 5 taona taorian'ny nidirako tao amin'ny bilaogy dia nihaino ireo mpampiasa izahay. Na i Libreoffice aza dia manana biby fiompy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny hevitro momba ny fijery sy fahatsapana an'i Libreoffice II
fihomehezana dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara saika andramako.
Amin'ny sary farany dia manana rohy ianao 😛
Mamaly an'i smeh
Salama, vaovao amin'ny Linux aho ary tsy haiko ny mametraka ny fanavaozana ny Birao amin'ny fiteny Espaniola. Afaka manome fanazavana amiko ve ianao? Misaotra Jorge
Raha mampiasa Ubuntu na distro hafa mifototra aminy ianao, ity baiko manaraka ity dia hametraka ny fonosana amin'ny teny Espaniola ho an'ny LibreOffice:
sudo apt-mahazo mametraka libreoffice-l10n-en
Tazomy ny menus nentim-paharazana sy ny toolbar! Ary tazomy ny safidin'ny mpampiasa malalaka!
Nataoko ny fanovana ary tsy tiako izany, ahoana no fomba fanafoanana ilay fanovana?
Eo amin'ny farany ambony havanana amin'ireo tsipika dia miseho ny menio.
Eo no hametahanao azy hahitanao ny bara Menu ary hiverina ianao hijery >> Fitaovana fizarana Toolbar >> Default.
Rafa Huete Lladó dia hoy izy:
Salama Raha omenao ny safidin'ny menio, omnibarra, ary avelao ny marika voafantina, bara voaangona feno, dia 'xulo' kokoa ary azo ampiasaina. Farafaharatsiny mba hanandramako.
Valiny tamin'i Rafa Huete Lladó
tara ny 15 taona lasa ny fiovan'ny sary ... ary maharary ahy ny manohy miankina amin'ny Java amin'izao fotoana izao
😮 Tiako izany tiako, antenaiko fa manatsara azy ireo bebe kokoa izy ireo
Ahoana ny fomba hitantanana ny sambonao miaraka amin'i Odoo?